Top 6 Mặt nạ tảo biển nào tốt nhất hiện nay được ưa chuộng | Muasalebang - Muasalebang
Top 6 Mặt nạ tảo biển nào tốt nhất hiện nay được ưa chuộng | Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 Mặt nạ tảo biển nào tốt nhất hiện nay được ưa chuộng | Muasalebang in Muasalebang
Imaski yokhula lwasolwandle umugqa wamaski okunakekela isikhumba anezithako ikakhulukazi ezivela olwandle. Lo mkhiqizo okwamanje uthandwa kakhulu, ukhethiwe futhi usetshenziswa abesifazane abaningi. Ngakho line imaski yasolwandle Iyiphi edume kakhulu njengamanje?
1 Iyini imaski yokhula lwasolwandle?
2 Izimaski ezi-6 ezihamba phambili ze-seaweed namuhla zidumile
2.1 1. Annabella Angel Aqua imaski yasolwandle
2.2 2. Imaski Ye-Seaweed Engenasici
2.3 3. I-Seed Mask Desembre
2.4 4. Louis-J Revolution imaski yasolwandle
2.5 5. Lus Marine Algae Mask
2.6 6. I-Jeju Marine Algae Bio-essence Bio Mask
3 Imiyalo yokusebenzisa imaski yezimila zasolwandle ukuthi isebenza kangaki ngeviki
4 Ibiza malini imaski yokhula lwasolwandle? Lapho ongathenga khona okwangempela
Iyini imaski yokhula lwasolwandle?
Imaski yasolwandle umugqa wamaski okunakekelwa kwesikhumba izithako zawo eziyinhloko ziyizinyosi ezikhishwe olwandle. Lokhu kungenxa yokuthi ngokocwaningo, ukhula lwasolwandle luqukethe imisoco ephezulu kakhulu futhi ecebile.
Izinhlobonhlobo zezakhamzimba ezidingekayo esikhumbeni zitholakala olwandle olunjengovithamini C, uvithamini E, A1, K, B1, B2, uvithamini B6. Ngaphandle kwalokho, le nto futhi iqukethe i-folic acid, i-niacin acid, i-pantothenic acid namaminerali afana ne-calcium, i-phosphorus, i-magnesium, i-zinc, insimbi ….
Ngakho-ke, ngaphezu kokwenza imaski, ukhula lwasolwandle lungasetshenziswa futhi ukwenza imigqa yomkhiqizo wokudla esebenzayo, ukusiza ukwengeza umsoco kanye nokwenza ngcono impilo yabantu.
Imaski yokhula lwasolwandle nayo ihluke kakhulu, inamaski wephepha, imaski yethebhulethi noma imaski eyimpuphu…. ngakho-ke ungakhetha ukuhambisana nezidingo zakho kanye nezici zesikhumba.
Izimaski ezi-6 ezihamba phambili ze-seaweed namuhla zidumile
Njengoba kushiwo ngenhla, ukhula lwasolwandle luhle kakhulu empilweni nasebuhleni. Ngakho-ke, le nto manje isetshenziswa kabanzi ebuhleni nasekunakekelweni kwesikhumba amafomula. Ngakho-ke ake sithole izinhlobo eziyisi-6 eziphezulu imaski yasolwandle Yikuphi okukalwe okungcono kakhulu okwamanje?
1. Annabella Angel Aqua imaski yasolwandle
I-Annabella Angel Aqua iyimaski enezithako zokhula lwasolwandle ethandwa kakhulu namuhla. Lo mkhiqizo uvela eThailand futhi izithako eziyinhloko okuyizinto zemvelo.
Ezinye izithako ezibalulekile kulo mkhiqizo zihlanganisa i-seaweed extract, i-pomegranate seed extract. Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo uqukethe amavithamini amaningi, i-hydrolytic collagen nezinye izinhlobo ze-hyaluronic acid namaminerali emvelo.
Ukusebenzisa le maski ye-Annabella seaweed kuzokunikeza umuzwa opholile, oqabulayo futhi omnene ngokwedlulele.
Akukhona lokho kuphela, ukuphumelela kwalo mugqa womkhiqizo ekunakekelweni kwesikhumba somuntu nakho kuyaziswa kakhulu. Ngokuqondile, lo mkhiqizo we-mask unamandla okuthambisa futhi uthambisa isikhumba ngokushesha, ulethe ukuthamba ngemuva kokusebenzisa imaskhi.
Ngaphandle kwalokho, i-Annabella Angel Aqua ingakwazi futhi ukulinganisa i-pH yesikhumba, isize ukuqinisa izimbotshana, futhi isize ukubambezela inqubo yokuguga kwesikhumba ngempumelelo. Lo mkhiqizo futhi usekela kahle kakhulu ekwelapheni amabala amnyama, i-pigmentation nama-freckles esikhumbeni, okusiza isikhumba ukuba sibe esisha, ngisho futhi sibe mhlophe.
Ikakhulukazi, le mask yasolwandle i-Annabella nayo ifakazelwa ukuthi iyakwazi ukuhlanza isikhumba ngokujulile, isiza ukususa ukungcola, i-sebum esikhumbeni nasezimbotsheni. Le mask ingabuye ilawule futhi ilawule ukukhishwa kwe-sebum, ibulale ngempumelelo amabhaktheriya, ngaleyo ndlela ivimbele ukwakheka nokubukeka kwamabala “amabi” wezinduna.
Futhi nokho, lo mugqa wemaski ungaphinda ukhuthaze ukukhiqizwa kwe-collagen esikhumbeni, usize isikhumba sakho sibe sincane, sibe mnyama futhi silingane. Umkhiqizo imaski yasolwandle Le Annabella yenziwe ngokuphelele ngemicu yemvelo kakotini, ngakho iphephile futhi ayinabungozi esikhumbeni, ingabangeli monakalo noma izinkinga zokucasuka ngesikhathi isetshenziswa.
Lo mkhiqizo ufanelekile ikakhulukazi kulabo abanesikhumba esomile, esiphelelwe amanzi kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 50,000 VND / 30ml isikhwama
2. Imaski Ye-Seaweed Engenasici
I-Flawless Seaweed Mask nayo ingomunye wemigqa yemaski ethandwa kakhulu enezimila zasolwandle namuhla. Lo mkhiqizo usuka e-Korea, ukhiqizwa emigqeni yobuchwepheshe obuthuthukile nesimanje obuhlanganisa i-Japan ne-Korea.
Izithako zalo mugqa wemaski we-Seaweed ziyizinhlayiya ze-seaweed zaseKorea ezingu-100%, eziletha izinzuzo eziningi ezinhle esikhumbeni sakho.
Imaski yasolwandle Lolu khula lwasolwandle luqukethe izinto eziningi ezisebenzayo zokuthambisa kanye nezakhi ezibalulekile, ezidingekayo esikhumbeni. Umphumela olethwa yilo mkhiqizo uhluke kakhulu. Okokuqala, iyi-antioxidant, evimbela izimpawu zokuguga esikhumbeni. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo unganciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala esikhumbeni sakho.
Ngaphandle kwalokho, ukusebenzisa le mask kungathambisa futhi kunikeze amanzi esikhumbeni; Ivimbela isikhumba ukuthi singaxebuka, some futhi siqhekeke. Umkhiqizo uphinde ukhuthaze ukukhiqizwa kwe-collagen ngaphakathi kwesikhumba, okwenza isikhumba sibe mhlophe futhi sibe yintsha. Ngakho-ke, emva kwesikhathi sokusebenzisa le mask yasolwandle, isikhumba sakho sizoba pink ngokugqamile futhi sibe mhlophe; Amabala amnyama, izindawo zesikhumba ezifiphele zizosuswa.
Lo mugqa wemaski wezimila zasolwandle uphephile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, okuhlanganisa nesikhumba esithandwa izinduna kanye nesikhumba esibucayi.
Intengo yesithenjwa: 139,000 VND/ibhokisi lezingcezu eziyi-10.
3. I-Seed Mask Desembre
I-Seed Seed Mask Desembre iwumugqa wamamaski acwaningwe futhi akhiqizwe ngokukhethekile amantombazane ukusuka esikhumbeni esomile ukuya esikhumbeni esinamafutha. Lo mkhiqizo ufakazelwa ukuthi uphephe kakhulu kubasebenzisi, awubangeli ukucasuka esikhumbeni, ngisho nesikhumba esibucayi noma isikhumba esithandwa yizinduna.
Izithako zalo mugqa we-mask yizo zonke izingcaphuno zemvelo, ezisebenza kahle kakhulu ekuthuthukiseni isikhumba esomile, esingenawo amanzi, okwenza isikhumba sibe manzi futhi sigcwele.
Akukhona lokho kuphela, lo mkhiqizo ubuye wengezwe ngokuqukethwe okuphezulu kwe-collagen. Ngenxa yalokho, isikhumba sakho sizokhanya, sibushelelezi kakhulu, amabala amnyama, ama-freckles, imibimbi esikhumbeni sizofiphazwa ngokuphumelelayo.
Ikakhulukazi, le mask yasolwandle yasolwandle nayo ingahlanza isikhumba. Izakhamzimba kulo mkhiqizo zizongena ezimbotsheni, zishanele ukungcola, i-sebum nokungcola okukuwo, kusize isikhumba sakho ukuthi sivuleke kakhudlwana, sivimbele ukuvela kwezinduna.
Intengo yesithenjwa: 900,000 VND/ibhokisi lezingcezu eziyi-10.
4. Louis-J Revolution imaski yasolwandle
ULouis-J Revolution umugqa imaski yasolwandle ethandwa kakhulu namuhla. Lo mkhiqizo unohlu lwesithako oluphephile kakhulu futhi olumnene lwesikhumba.
Izithako ezikulo mkhiqizo yizo zonke izingcaphuno zemvelo, amakhambi okwelapha asempumalanga abalulekile, njenge-seaweed extract, i-chrysanthemum extract, i-reishi, iparele, i-mint, i-peach blossom…. Ngakho-ke, umphumela olethwa yilo mkhiqizo esikhumbeni sakho uphelele kakhulu.
Ngokusetshenziswa kwalo mugqa womkhiqizo, isikhumba sakho sizokhanya ngemuva kokusetshenziswa ngakunye. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo ungaphinda unikeze amanzi futhi unikeze amanzi esikhumbeni, wenze isikhumba sakho sibe bushelelezi futhi sithambile.
Ngaphandle kwalokho, lo mugqa we-mask we-Louis wasolwandle usiza futhi ukugqugquzela inqubo yokuvuselelwa kwesikhumba, usize isikhumba ukuba siqine, kusize ukuthuthukisa kancane kancane izimpawu zokuguga. Lo mkhiqizo uzosiza futhi ukufiphaza amabala amnyama, amabala amnyama esikhumbeni, okusiza ukunciphisa ama-pores ngokuphumelelayo.
Intengo yesithenjwa: 350,000 VND/ibhokisi lika-100g.
5. Lus Marine Algae Mask
I-Lus Marine Algae futhi ingomunye wemigqa yemaski equkethe izithako zasolwandle ezithandwa kakhulu ngabesifazane namuhla. Ngaphandle kwezimila zasolwandle, lo mkhiqizo uqukethe namavithamini athathwe ezithelweni ezintsha, okusiza isikhumba sakho ukuba sigcwaliswe ngamanzi, sigcwaliswe ngokugcwele, ngaleyo ndlela sibe sithambile kakhulu futhi sibushelelezi.
Ngaphandle kwekhono lokufaka amanzi kanye nokuthambisa isikhumba, lo mugqa we-mask ungasiza futhi ithoni yesikhumba, ukuqina kanye nobusha. Akukhona lokho kuphela, lo mugqa womkhiqizo ungashanela ukungcola, i-sebum esikhumbeni, usize ukuthuthukisa umbala omnyama, ongalingani esikhumbeni sakho.
Izakhamzimba emgqeni imaski yasolwandle Lokhu kungena ngokushesha esikhumbeni, kuletha imiphumela emihle ekunakekeleni isikhumba sakho. Lo mkhiqizo ufanelekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, awubangeli ukucasuka ngesikhathi sokusetshenziswa.
6. I-Jeju Marine Algae Bio-essence Bio Mask
I-Bio Jeju Marine Algae Bio-essence nayo iyimaski enezithako zokhula lwasolwandle eyaziwa kakhulu namuhla. Lo mkhiqizo unomklamo wangaphandle opholile kakhulu, oletha umuzwa opholile kakhulu.
Izithako zalo mugqa wemaski ngokuvamile ziyizinto ezikhishwayo zemvelo, ezingenabo nhlobo utshwala, ama-parabens, namafutha amaminerali, ngakho-ke kuphephe kakhulu futhi kuyingozi esikhumbeni somsebenzisi. Imaski inomklamo omncane futhi okhanyayo ongagona ubuso, usize ukukhulisa amandla esikhumba okumunca imisoco.
Umphumela olethwa yile mask yasolwandle uhluke kakhulu. Umkhiqizo ungakwazi kokubili ukuthambisa isikhumba kahle, wenze isikhumba sikhanye, futhi ungelapha izinduna kanye ne-anti-inflammatory, usize ukuvimbela induna ukuba ingabuyi.
Kodwa-ke, i-Bio Jeju Marine Algae Bio-essence inokungalungi okuncane kokuthi iqukethe iphunga. Ngakho-ke, labo kini abangezwani nalesi sithako badinga ukuqaphela lapho bekhetha.
Imiyalo yokusebenzisa imaski yezimila zasolwandle ukuthi isebenza kangaki ngeviki
Imaski yasolwandle Inezinzuzo eziningi ezibalulekile esikhumbeni sakho, okusenza sikhanye, sishelele futhi sibe ne-plupper. Kodwa-ke, udinga ukukhumbula ukuthi umphumela olethwa yilo mkhiqizo esikhumbeni sakho ungabonisa okuhle kakhulu uma usetshenziswe ngendlela efanele.
Isinyathelo 1: Okokuqala, hlanza ubuso bakho ngesikhiphi sezimonyo nesihlanza. Lesi yisinyathelo sokuqala sokunakekela isikhumba okudingeka usiphathe nsuku zonke ukuze uqinisekise ukuthi isikhumba sakho sihlala sihlanzekile, somile, futhi sisiza ekwandiseni ukumuncwa kwemisoco kumaski kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba.
Isinyathelo sesi-2: Khipha imaski esikhwameni futhi uyisakaze ebusweni bakho. Kuleli qophelo, sebenzisa iminwe yakho ukuze ucindezele kancane futhi ulungise ukuze imaski ibe sesimweni esifanele futhi ingalingana ubuso bakho ngokuqinile.
Endabeni ye-powder noma imaski yethebhulethi, udinga ukuyigaya bese uyixuba namanzi. Okulandelayo, sebenzisa ibhulashi lemaski ukuze ubambe ingxube kumaski weshidi bese uyisebenzisa ebusweni bakho.
Isinyathelo sesi-3: Phumula futhi uphumule imizuzu engaba ngu-15 ukuze izakhi ezisemaski zibe nesikhathi esanele sokungena esikhumbeni.
Isinyathelo sesi-4: Hlanza ubuso ngamanzi ahlanzekile futhi ulandele ezinye izinyathelo zokunakekela isikhumba.
Ukuze imaski yasolwandle iphumelele, kufanele ugcine le mask izikhathi ezingu-1-2 ngesonto.
Ibiza malini imaski yokhula lwasolwandle? Lapho ongathenga khona okwangempela
Imaski yephepha yasolwandle ibiza cishe i-20,000 VND – 30,000 VND/ucezu. Le ntengo izohluka kuye ngezithako kanye nohlobo lomkhiqizo.
Ukuze uthenge le maski yangempela, vakashela amawebhusayithi e-Vietnamese e-commerce amakhulu nanedumela elihle njengeLazada, Tiki, Shopee noma iSendo… Ukuthenga lapha kuzokusiza wonge imali kanye nomzamo owengeziwe wokuhamba. Akugcini lapho, lokhu kusiza futhi ukunciphisa ubungozi bezingozi kuwe, kukusiza ukuthi ungadingi ukuya kude futhi uthenge umkhiqizo owuthandayo.
Nazi eziphezulu ezingu-6 imaski yasolwandle aziwa kakhulu njengamanje. Ngethemba, ngalesi sihloko, uzokwazi ukuzikhethela umugqa womkhiqizo ofaneleka kakhulu, ukukusiza unakekele isikhumba sakho ngendlela engcono kakhulu futhi ephumelelayo kakhulu.
Xem Thêm [Review] Chi tiết 4 loại xà phòng trị thâm mông tốt nhất | Muasalebang
5+ Cách Khôi Phục Dữ Liệu Đã Xóa Trên Điện Thoại Hiệu Quả | Muasalebang